Furashada iPhone 7 waxay muujineysaa inaad awood u yeelan doonto inaad doorato badhanka Start | Waxaan ka socdaa mac
Berri, si rasmi ah, cutubyada ugu horreeya ee iPhone 7 cusub iyo iPhone 7 Plus ayaa bilaabi doona inay u yimaadaan iibsadayaashooda ugu horreeya. Intaa waxaa dheer, sidoo kale laga bilaabo berrito waxay noqon doontaa suurtagal in si toos ah looga iibsado dukaamada, haddii ay jiraan keyd ku filan, wax u muuqda mid aan macquul ahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan horeyba u arki karnaa mid ka mid ah furitaankii ugu horreeyay ee iPhone 7.
YouTuber MKBHD wuxuu horey ubooday labo kamid ah moodooyinka cusub. Waa iPhone 7 madow dhalaalaya, iyo iPhone 7 Plus oo madow madow ah. Wuxuu ka saaray sanduuqyadooda, wuxuu muujiyey waxa ku jira mid kasta oo ka mid ah, oo ay ku jiraan Lightning EarPods cusub iyo adabtaradaas muranka dhaliyay. Iyo sidee bay noqon kartaa si kale, waxay sidoo kale na tustay talaabooyinka nidaamka qaabeynta oo muujinaya taas Waxaan dooran karnaa habka uu u shaqeeyo badhanka cusub ee Start.
1 Furashada iPhone 7-ka ayaa wax yar naga yaabisay
1.1 Saddexda ikhtiyaar ee badhanka cusub ee Start
2 Inta hartay sanduuqa
Furashada iPhone 7-ka ayaa wax yar naga yaabisay
Waxay ahayd wax ilaa daqiiqaddan aynaan ogayn. Markuu MKBHD bilaabay inuu ka gudbo nidaamka dejinta macruufka, wuxuu helay talaabo cusub oo dheeri ah oo ku saabsan iPhone 7 oo aan horey u jirin. Waa a ikhtiyaar u leh xulashada ra'yi-celinta 'haptic' ee badhanka guriga cusubi u soo bandhigi doono isticmaalaha.
Markaad dooratid oo aad xaqiijiso luqadda nidaamka qalliinka, gobolka ay ku taal, oo aad qaabeysid Aqoonsiga Taabashada, Siri wuxuu soo galay Apple ID-kaaga, iPhone 7 Waxay kuu sheegi doontaa "inaad ogaato badhanka cusub ee bilowga." Laga soo bilaabo MacRumors waxay tilmaameen inay soo bandhigeen ikhtiyaarkan cusub bilawga iOS 10 ee cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus ka dhigaysa "waayo-aragnimadaada iPhone xitaa mid shaqsiyeed adiga oo dooranaya guji adiga kugu habboon."
Saddexda ikhtiyaar ee badhanka cusub ee Start
Tallaabadan cusub, IPhone wuxuu na siin doonaa seddex ikhtiyaar oo leh dareemo kala duwan oo ah jawaab celinta haptic. MKBHD wuxuu ku sifeynayaa ikhtiyaar inuu yahay "mid aad u fudud," ku dhowaad heer uusan hubin inuu badhanka riixayo iyo in kale. Ta saddexaad waxay ku qeexaysaa inay tahay "jawaab aad u adag", halka ikhtiyaarka labaad uu u arko inuu yahay barta dhexe ee u dhexeysa labadii hore. Wuxuu yiri ikhtiyaarka dhexe ee ah "taleefanka oo dhan wali wuxuu umuuqdaa mid birqaya", laakiin wuxuu go'aansaday inuu la aado ikhtiyaarka saddexaad ee aadka xasaasiga u ah si loo hubiyo markii badhanka la riixay
Inta hartay sanduuqa
Inta kale, waxay umuuqataa in waxa kujira sanduuqa iyo isku xirnaanta iPhone 7 cusub ay yihiin, ilaa xad, waxa aan kusoo aragnay qaab dhaqameed.
IPhone kasta wuxuu la yimaadaa dukumiintiyo caadi ah, fiilo hillaac ah, adabtarada awooda USB-ga iyo hada, EarPod-yada cusub ee hillaaca iyo adabtarada hillaaca ee loo yaqaan '3,5mm jack', oo ah warka ugu weyn sanadkaan.
Iyaguna waa loo fiirsadaa laba faraq marka loo eego sanadihii hore. Dhinaca kale, sameecadaha dhagaha cusub kuma sii jiraan sanduuqaas caagga ah ee yar ee aan ku aragnay moodellooyinkii hore. Dhinaca kale, hadda iPhone ma soo muuqdo sida ugu dhakhsaha badan ee sanduuqa la furo, laakiin dukumiintiyada ayaa ku yaal. Kaliya gadaal moodooyinka hore.
MKBHD waxay fiidiyoogeeda ku muujineysaa sanduuqa laba nooc oo kala ah, matta madow iyo madow dhalaalaya. Isaga waxay ku talinaysaa matte madow dhalaalaya, oo uu ugu yeeray "daabacaad gaar ah" oo u horseedi karta xoogaa jahwareer isku daygeena ah inaan nadaafadda ilaalino.
Waxay sidoo kale sameysay tijaabo Geekbench deg deg ah, taas oo xaqiijinaysa taas iPhone 7 Plus waxaa ku jira 3GB RAM iyo inay tahay hal xudun.
Berri waxaa jiri doona daahfurka weyn ee iPhone 7, oo xiisaha ayaa u kordha waqtiyada qaar badan. Apple ayaa horeyba u xaqiijisay in dhamaan unugyada iphone 7 Plus iyo iphone 7 oo ku jira gloss madow la iibiyay ka hor bilaabida berrito isla markaana aan laga heli doonin dukaamada Apple. macaamiisha socodka.
Isticmaalayaasha doonaya inay iibsadaan moodooyinka kale ayaa durbaba bilaabay inay saf ka galaan dukaamada Apple hortooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Furashada iPhone 7 waxay muujineysaa inaad dooran karto badhanka Guriga